Isu tatoziva zuva rekuburitsa uye mutengo weiyo Doogee S98 nyowani | Nhau Gadgets
Ignatius Room | 18/03/2022 13:16 | Nhare mbozha
Musi waKurume 28, iyo Doogee S98 icharova pamusika, iyo itsva rugged smartphone kubva kumugadziri Doogee, inozivikanwa se foni yakashata, uye ichaita saizvozvo nemutengo wakakosha wekusuma wemadhora mazana maviri nemakumi matatu nepfumbamwe, mutengo wekusuma unozongowanikwa pakati paKurume 239 naKubvumbi 28.
Mutengo wenguva dzose wechishandiso ichi imadhora mazana matatu nemakumi matatu nepfumbamwe, saka sumo yekupa inotibvumira kuchengetedza zana remadhora. Uye zvakare, isu tinogona kutora chikamu mukudhirowa kwe4 Doogee S98 kuburikidza newebhusaiti yayo. Kubva Kurume 28 kusvika Kubvumbi 1, tinogona kutenga iyo Doogee S98 ye 239 madhora en AliExpress y doogeemall.
1 Ko iyo Doogee S98 inotipei
1.4 Bhatiri kusvika kumazuva matatu
2 Kupi kwekutenga iyo Doogee S98
Nzvimbo yekuchengetedza 256 GB USF 2.2 uye inowedzerwa ne microSD
Screen 6.3 inches - FullHD + resolution - LCD
vamwe NFC - Android 12 - 3 makore ekugadzirisa
Iyo Doogee S98, inotungamirwa ne processor Helio G96 kubva kuMediaTek. Pamwe chete nepurosesa, tinowana 8 GB ye RAM uye 256 GB yekuchengetedza, chengetedzo yatinogona kuwedzera tichishandisa microSD kadhi.
Iyo Doogee inosanganisira 2 skrini. Yekutanga uye huru ine saizi ye 6 inches. Yechipiri skrini, tinoiwana mu kumashure uye ine saizi 1,1 inches.
Neiyi skrini yekumashure, tinogona kuona nguva, maneja kutamba kwemimhanzi, pindura mafoni, tarisa mwero webhatiri, ona mameseji atatambira...
Kuve kamera imwe yezvikamu izvo vashandisi vanonyanya kufunga nezvazvo, vakomana veDoogee vakanyatso teerera pazviri. Kuseri kwechigadzirwa, tinowana 3 lenzi:
8 MP yakafara angle uye
20 MP yekuona husiku sensor yakagadzirwa naSony.
Iyo yekumberi kamera inogadzirwa neSamsung uye ine a 16 MP resolution.
Bhatiri kusvika kumazuva matatu
Na 6.000 naRaama bhatiri, Doogee S98 ine kuzvimiririra kwemazuva maviri kusvika ku2 nekushandisa zvine mwero kwechigadzirwa.
Inoenderana ne nekukurumidza kuchaja kusvika ku33W, nechaja inosanganisirwa yesimba rimwechete. Inoenderanawo nekuchaja isina waya.
Kupi kwekutenga iyo Doogee S98
Iyo Doogee S98 nyowani ichave iripo paAliexpress uye Doogeemall ine zvinongedzo mune chinyorwa chinyorwa. Kana kusimudzirwa kwekutanga kwapera, mutengo uchave $339. Kana hupfumi hwako husingazvibvumire, iwe unogona zvakare kuwana imwe ye4 Doogee S98 iyo mugadziri anokanganisa kuburikidza newebhusaiti yayo ine zvinongedzo zvakaratidzwa pamusoro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Nhare » Nhare mbozha » Isu tatoziva zuva rekutanga uye mutengo weiyo Doogee S98 nyowani